Ukuhlaziywa kwe-VR Drone Autoflight | I-Drone enekhamera ye-HD + nezibuko ze-FPV | Izindaba zamagajethi
Ukuhlaziywa kwe-VR Drone Autoflight
Namuhla sikulethela a ukuhlaziywa kwedrone entsha ebesikuhlola amasonto ambalwa. Igama lakhe ngu I-VR Drone Autoflight futhi iyidrone yaphakathi nobubanzi eyenzelwe ngokukhethekile abashayeli bezindiza abasha futhi abafuna ukungena emhlabeni womuntu wokuqala wokushayela (i-FPV) ngenani elifanele, ngoba sinayo itholakala nge- € 199 kuphela. Phakathi kwezici zayo ezivelele kakhulu sinekhamera ye-HD ebanzi ebanzi, uhlelo lokuzibekisela okuzenzakalelayo oluzosiza kakhulu ekuhloleni abashayeli bezindiza abangenalwazi nokuthi iza ne-VR Drone Glasses ifakiwe kwiphakeji uqobo. Ngabe ufuna ukubona ezinye izici? Ungaphuthelwa isibuyekezo sethu.
1 Idizayini ye-VR Drone Autoflight nezinto zokwakha
2 Ikhamera ye-Drone
3 Izici ze-Drone
5 Ungayithenga kuphi i-drone?
8 Igalari yezithombe zeDrone
Idizayini ye-VR Drone Autoflight nezinto zokwakha
Kokubili idivayisi nokulawula kwenziwa ngaphakathi izinto ezisezingeni eliphakeme nangokuthinta okumnandi. I-drone inamandla impela, imelana nokuwa ngaphandle kwezinkinga futhi iza nokuvikelwa esingakufaka ukwenza izindiza zokuqala zokuhlola ngaphandle kwengozi yokulimaza izindwani zedivayisi. I- isilawuli sinomuzwa wenjoloba kumnandi kakhulu futhi lokho kufaka ibhonasi esezingeni eliphakeme kumkhiqizo. Isisindo sesilawuli sikhanya impela, silungele ukuvimbela isandla sethu ukuthi singakhathali ngesikhathi sendiza.
Ikhwalithi ye- emaphaketheni kuphakeme kakhulu kunalokho obekulindelekile kumkhiqizo walolu hlu; Iphakethe liqinile futhi liza nesibambo ngakho-ke kusisiza ukuhambisa i-drone kamnandi. Ngaphezu kwalokho, yonke imikhiqizo iza ifakwe ngokuphelele ngamaphakethe amaningi ukuze sikwazi ukuyihambisa ngaphandle kwengozi yokuthi ihambe futhi ilimaze phakathi nohambo.
Ikhamera ye-drone I-Wide angle HD futhi idlulisa ividiyo ebukhoma ukuze ikwazi ukwenza izindiza ze-FPV. Ibuye ikuvumele ukuthi urekhode izithombe namavidiyo, ekhadini le-SD futhi ngqo kwimemori ye-smartphone. Ukurekhoda ekhadini le-SD kuzodingeka ukhiphe ikhamera ku-drone (kufanele ucindezele ithebhu) futhi ngaphakathi uzobona indawo lapho ungabeka khona ikhadi eliza ngaphakathi kwememori ye-USB.
Ikhamera kungalungiswa ezindaweni ezahlukahlukene ezahlukahlukene, esiza kakhulu ukuvimbela ama-blade ukuthi aphume kumavidiyo lapho sifuna ukwenza ividiyo yendiza nokulungisa umbono ofanele kakhulu lapho sesizondiza kumuntu wokuqala.
Njengoba sike saphawula phambilini, iVR Drone Autoflight iyi-drone yokuqalisa kulula ukundiza. Ibuye ibe nemodi yokuzibekelela ekwaziyo ukuthola izinto ezisendaweni yayo ukukuvimbela ekwenzeni iminyakazo ebeka ingozi engcupheni. Lesi sici silungele abasebenzisi abangenalwazi kepha kungaba nzima ukusisebenzisa uma ungumshayeli onolwazi.
Idivayisi inamandla futhi inesisindo esifanele ukukwazi ukundiza ngaphandle nangomoya olinganiselwe. Isikhathi sokuphendula silungile, esivumela i-drone ukuthi indize kalula. Iza ifakwe inkinobho yokususa nokuzenzakalelayo okuzenzakalelayo, ukulawula ngokuphelele, izivinini ezimbili nemodi yokuvivinya esivumela ukuthi senze amaluphu angama-360º ngokuthinta ukhiye. Ngokuya ngezivivinyo zethu, ibhethri inikeza imizuzu engu-15 yokundiza, ancishiswe kancane uma sibeka izivikelo zamakhasi lapho silahlekelwa yiminye yemvelo ye-aerodynamics yesethi.
Izibuko ze-VR Drone ziyi- imodeli elula kakhulu yezingilazi zokuqala. Ngokuyinhloko kuyisimo lapho kufanele ufake khona i-smartphone yakho ukuze ukwazi ukusebenzisa imodi yokuhlola yomuntu wokuqala futhi ukwazi ukujabulela isipiliyoni sokuqala kule modi yendiza. Ukubekwa kwayo kulula kakhulu, ufaka uhlelo lokusebenza lwedrone kuselula yakho, uvule indawo yokubeka, ubeke i-smartphone uyilungise endaweni efanelekile ukuze ukwazi ukubona ingxenye ngayinye yesikrini ngeso ngalinye, uyibuyisele ezingilazini bese wena ingaqala ukundiza.
Inkinga ngalolu hlobo lwezinhlelo ezisebenza nomakhalekhukhwini ukuthi kuvame ukuba khona ukusala kancane kuvidiyo, okwenza kube nzima ngathi ukuthi sishayele i-drone uma singenakho okuhlangenwe nakho okuthile, ngakho-ke asincomi ukuthi usebenzise le ndlela yokundiza emasontweni akho okuqala nedivayisi.
Ungayithenga kuphi i-drone?
I-VR Drone Autoflight Iyatholakala esitolo se-inthanethi seJuguetronica ngentengo engu- € 199. Njengoba siphawule, iyi- inani elihle kakhulu lemali i-drone esezingeni lokungena okulula ukundiza ngisho nakwabashayeli bezindiza abangenalwazi oluningi.
I-VR Drone Autoflight
Kulula kakhulu ukundiza
Iqinile futhi isezingeni elihle
Inani elihle lemali
Ukubambezeleka kwevidiyo kumodi ye-FPV
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Izibuyekezo » Ukuhlaziywa kwe-VR Drone Autoflight
I-LG G7 ThinQ, i-flagship ebuye ibheje ku-Notch ethandwayo